AYYAANA GUYYAA GOOTOTAA, Ebla 15, 2021 – Adda Bilisummaa Oromoo
[ June 28, 2021 ] የተወዳጁ አርቲስት ሃጫሉ ሁንዴሳ ግድያ 1ኛ ዓመት መታሰቢያን ምክንያት በማድረግ ከኦሮሞ ነጻነት ግንባር የተሰጠ መግለጫ -ሰኔ 28፡ 2021ዓም የኦ ነ ግ መግለጫ- ሰኔ 28፡ 2021ዓም	Ibsa ABO
[ June 28, 2021 ] Yaadannoo Waggaa 1ffaa Ajjeechaa Artistii Jaallatamaa Haacaaluu Hundeessaa Ilaalchisuun Ibsa Adda Bilisummaa Oromoo.	Ibsa ABO
[ June 27, 2021 ] IBSA GADDAA ABO	Ibsa ABO
[ June 25, 2021 ] Mootummaan Baraaraa Akka Hundeeffamuu Fi Mariin Siyaasaa Qooda Fudhattoota Mara Hirmaachise Akka Gaggeeffamuuf Waamicha Goona	Ibsa ABO
[ June 25, 2021 ] በኢትዮጵያ ጊዜያዊ የኢፌዲሪ አድን መንግስት እንዲመሰረትና በባለድርሻ ኣካላት መካከል ሁሉን-አቀፍ የፖለቲካ ውይይት እንዲጀመር የቀረበ ጥሪ	Ibsa ABO
Ummatni Oromiyaa dhuma jarraa 19ffaa irratti yeroo afaan qawweetiin harka halagaa jalatti kufee biyya namaa humnaan dhiibee, dangaa namaa cabsee nagaa booressee utuu hin taane, warra humnaan Oromiyaa cabsee qabeenyaa isaa saamuu fi of jalatti cabsee bituu hawwateetu daangaa itti cabsee mirga uumamaan qabu irraa sarbe. Loollii Caalii Callanqoo, Harkaa muraa fi Harmaa muraan Annoolee akkasumaas loolootiin gurguddoo bakkoota adda addaatti qeyyee isa irratti gaggeeffaman seenan galmessee jira. Ummatni Oromiyaa guyyaa cabee irraa kaasee, bilisummaa fi abbaa biyyummaa isaa mulqame deeffachuuf finciloota walirraa hin citne gaggeessaa jiraate. Finciloota akka Rayyaa fi Azabo (1928-30), Dawwee (1947), Konfedresii Oromoota dhihaa (1936), baddaa Harargee (1943 fi 1948), kan Kibbaa Oromiyaa keessatti yeroo adda addaatti ka‘ee deebi’ee dhaamaa ture; tattaffiin Waldaa Macaa fi Tulamaa Oromoo deebisee ijaarsaan lafaa kaasuu godhee, Sochii Kibbaa Oromia fi Falmii mana Barumsaa University Finfinnee keessaatti bara 60-ota keessa tahaniin sochiin uummata Oromoo gara sadarkaa biyyooleessaatti akka bifa qabaatu taasise.
Deemsi kun ummatni Oromiyaa cabee waggaa dhibba booda akka ABOn bara 1973 waaltummaan mul’ata siyaasaan mirga isaa falmachuuf kan isaaf tahu akkasumas hogganaa fi jarmiyaan akka dhalatu godhe. Qabsoo bara dheeraa kana keessatti wareegamni guddaan baafameeraa.
Ebla 15 deemsaa sochii ummataa keenyaa kan seena, kan kaleessaa fi har’aa wareegama qaqqaaliin ummatni Oromiyaa baasee Yaadannoo goonee kan waada keenyaa itti haareeffannuu dha. Wareegamni suukanneessaan Gammoojjii Somaliyaa (Shinniggaatti) erga mudatee kunoo waggoota 41 tahe. San boodas wareegamoota hedduu baafne, haalli amma keessa jirrus daballee wareegama baasuuf kan jiraannu tahuu nuuf eera. Keessumattuu dammaqinsi ummata Oromiyaa falmaa bilisummaa isaaf godhu bara 1991 yeroo mootummaan cehumsaa biyyattii keessatti ta’e irraa kaasee daran dabalaa akka dhufe tahuun beekamaa dha. Kun ammoo ABO’n adda durummaan dargaggootaa fi barattoota Oromiyaa dammaqsuu fi ijaaruun gara qabsootti akka dhufani mirgaa isanii falmatan gochuu irraa kan madde tahu dhugaa lafa jiruudha.
Ummatni hacuucaa didee bilisummaaf fincile yoomiyyuu deebiin isaa kan haqaa fi bilisummaa oolee bula malee hin hafu. Uummatni Oromiyaa hanga bilisummaa barbaadu argatutti wareegma sodaaf jecha qabsicha irraa of duuba mil’achuun gonkumaa akka hin jiraatne mirkaneessee jira. Haallii Ganfa Afrika fi Didhaleen harka nu qabanii baay’atanii karaan dheeratus mirgaa fi haqa keenya argachuuf jeecha murannoo fi of-irratti hirkannon qabsoo keenya masakuun milkii keenyaaf iggitii itti gochuun nu danboobsa.
Dhalootni haaraan galfata haadhotii fi abbootii kan hin nyaatne tahuu hojiin agarsiisuu qaba, kunis haala nama boonsuunis itti jirama. Har’as falmaa birmadummaaf godhamu keessatti ilmaan Oromiyaa xinnaa-guddaan, dhiiraa-dubartii fi hoogganaa fi hoogganamaa utuu adda hin bahin wareegama lubbuu, hidhaa fi qe’ee ofii irraa buqqaafamuu mudachaa jira. Murannoo fi wareegamaaf qophii tahuun injifatnoo fida; injifannoon bilisummaa fida. Bilibilisummaa keenyaaf falmachuun mirgaa fi dirqama dhalootaa ti. Maayyii irratti, mohuu keenyas hin mamnu.
ABOn akkuma aadaa fi amala isaatti mirga lammiilee fi saba keenyaaf muratnoon dhaabbatuun dirqama isaa tahuu tolchee dhaaba beeku dha. ABOn filmaata biyyoolessaa fakkeessaa fi dharaa kan ta’e keessaatti akka hin hirmaatne ugguramuu isaa baree irraa dhaabbateera. Qajeelfama qabsoo haala yeroo waliin deemu dhuuka-bu’oota isaaf yeroo yerootti dabarsaa jira. Kunis itti fufa. Haala fedhe keessatti keessaa fi alaatti hojii jaarmaa fardeessuun tokkummaa fi walquba qabeenyaan dantaa lammiilee Oromiyaa fi Oromiyaa walteeffatee mirgaa ummatoota biros kabajuun socho’uu dirqama keenya tahuu tolchinee beekna.